Morocco: Morocco: Unugta jihadiga ah oo la burburiyo, 4 xarig (gudaha) - TELES RELAY
ACCUEIL » International Morocco: Morocco: Jihaadistii oo burburisay, 4 oo xarig ah (gudaha)
Morocco: Morocco: Qaybta jihaadiga ah oo la burburiyo, xarigga 4 (gudaha)
Mas'uuliyiinta Morocco ayaa ku dhawaaqay in ay burburinayaan maanta oo ah "argaggixisada argagixisada" oo ka kooban afar xubnood, oo looga shakiyay in ay doonayeen in ay weerar ku qaadaan boqortooyada.
»Akhri ALSO - Morocco: Jihadistaha jihaadiga ah ayaa la burburiyaa, xiritaan 13
Tuhmanayaasha, oo da'doodu u dhaxayso 33 iyo 38 sano, ayaa lagu qabtay Taza (woqooyi) inta lagu jiro howlgal ay sameeyeen Bureau Dhexe ee Garsoorka Baarista (BCIJ, qaybta la-dagaallanka argagixisada), ayaa sheegay in Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee hadal. cell ayaa waxaa madax u ah nin kuwaas oo la diriray ee Ciraaq iyo Suuriya, kuwaas oo u adeegi xukun xabsi in 2015 ah xaalad ah "argagixisada", isha ayuu yiri.
Qofkan ayaa lagu tuhunsan yahay in uu qorto xubno kale oo ka tirsan kooxda waxaana uu isku dayay inuu "ka faa'iideysto waayo-aragnimadiisii ​​dagaalka" inuu "qorsheeyo" weeraro ka dhanka ah "hay'adaha xasaasiga ah" ee Morocco. Wasaarada ayaa sheegtay in mid ka mid ah tuhmanayaashu ay hore u caawiyeen maalgelinta ka bixitaanka Moroccans si ay "ugu murugoodaan xiisadaha" ee Ciraaq iyo Suuriya. Mas'uuliyiinta ayaa intaa raaciyay in howlgalku uu qayb ka yahay "dagaalka lagula jiro hanjabaadaha la xiriira" kooxda Islaamiga ah ee jihaadka.
Heshiiska ayaa yimaado afar bilood ka dib dilkii laba dalxiise oo Scandinavian ee koonfurta Morocco, ee ficil ku tilmaamay "argagixiso" by Rabat. Laba iyo labaatan qof ayaa loo xidhay dilkii loo geystay. Boqortooyada, taas oo ku faantaa siyaasad aad u firfircoon ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada, ayaa lagu dhaawacay weerar ee Casablanca (33 2003 dhintay) iyo Marrakech (17 2011 dhintay).
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.lefigaro.fr/flash-actu/maroc-une-cellule-djihadiste-demantelee-4-arrestations-interieur-20190410
Digniintii Dacwadayda ee Meesha Nouhoum si toos ah: Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato
India: Xarumaha Aan Xaqiijin Karin Dukumintiyada Qarsoodiga ah, oo Xaqiijisay Amniga Qaranka, ayaa sheegay in SC | India News